Gaaffii Sidaamaa: Hokkarri Hawaasaatti eegale iddowwan biraatti miidhaa qaqqabsiise - BBC News Afaan Oromoo
Hokkara kaleessa magaalaa Hawaasaa fi magaalota godina Sidaamaa biroo keessatti umamee tureen namootaa fi qabeenyaarraan miidhaa qaqqabeera jedhan jiraattoonni fi jaarsooliin BBC'n dubbise.
Magaalaa Hawaasaa keessa yaaddoon nageenyaa jiraatulleen, har'a garuu dhaabbileen daldalaa tokko tokko saaqamuusaanii fi baajaajjoonnis daandiirratti mul'achu eegalusaanii jiraattoonni ni dubbatu.
Kaleessa irraa kaase tajaajjilli intarneetii kan adda cite yoo ta'u, WiFi'n akka hin jirree hoteeloota magaalichatti argaman lama irraa hubachuun danda'ameera.
Rakkina uumameen walqabatees namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne humnoota nageenyaatiin to'annoo jala oolfamusaanii miseensoonni poolisii fi jiraatoonni BBC'tti himaniiru.
Dargaggoota kaleessa to'annoo jala olfaman hiiksiisuuf akka buufata poolisiitti argaman kan dubbatan jaarsi biyyaa tokko haalli nageenyaa kaleessa irraa fooyya'e magaalatii keessa jiraachu dubbatu.
Rakkina umamee ture to'achuuf humnootiin addaa naannichaa, raayyaan ittisa biyyaa fi polisiin hedduun magaalattii keessa jiraachuus jiraattooni ni dubbatu.
Taateen uumame magaalaa Hawaasaatiin alattis iddoowwan birootti illeen miidhaa dhaqabsiiseera.
Namni naannoo Alattaa Wandootti hojii daldalaatiin bara dheeraaf hojjataa turan tokko BBC'tti akka himaniitti, ''kan kaleessa Alattaa Wandootti ta'e dubbatanii dhiisiitii osoo viidiyoon agarsiifamee iyyuu hin amantu ta'aa'' jechuun dubbatu.
Isaan akka jedhaniitti, dargaggooti muraasni gandoota ollaa irraa dhufan dargaggoota magaalattii waliin ta'uun tarree maqaa daldaltootaa fi bakka mana jireenyaasaanii qabachuun miidhaa qaqabsiisaniiru.
Namni kun itti dabaluunis namni reebame ykn kan miidhame jiraachu yoo hin beekneyyuu, manni jiraanyaa fi suuqiin daldaltoota bakka biraatii dhufanii hunda seenuun qabeenya, maallaqa baasuun gubaa turu argu himaniiru.
Dargaggoonni qabeenyicha gubuun alatti akka hanna hin raawwatiin kan himan jiraataan kun, dhaabbile daldalaa magaalattii keessa jiru jedhaman hundarra miidhaan qaqqabusaa himaniiru.
Fakkeenyaafis hoteela Asnaaqe Gabrakidaan jedhamu kutaalee ciisichaafi konkolaataan abbichaa gubachuu akkasumas suuqiiwwan daldalaa bakka Taayiwaan jedhamutti argaman qabeenyaa waliin gubachusaanii ni dubbatu.
Dargaggoonni magaalichaa guyyaa keessaa sa'aatii afur irraa eegaluun qabeenyaa barbaddeessuu eegalusaanii himuun, poolisiin magaalichaas guyyaa gutuuf omaa akka isaan hin gargaarree komataniiru.
Galgala dhukaasi jiraachusaa fi har'a [Jimaata] ganama garuu poolisii fi miseensonni raayyaa ittisaa magaalattii galusaanii himaniiru.
Akkasumas poolisoonni manarra deemuun namoonni manaa akka hin baaneef gaaffachaa jiraachu dabalanii himaniiru.
Itti gaafatamaan mana qopheessaa Alattaa Wandoo Obbo Fireew Alamu kaleessa magaalatiitti tasgabbiin akka hin turree BBC'tti himaniiru.
Harra raayyaan ittisaa waan magaalattii galeef tasgabbiin jiraachu himaniiru.
Jiraataan Magaalaa Yirgaalam kan BBC'n dubbise tokkos kaleessa waaree boodaa kaasee magaalattiin tasgabbii dhabuushee dubbatu.
''Kaleessa sa'aatii afurii kaasee haalli waljalaan geeddaramaa dhufeera. Namoonni reebamaniiru. Manneen gubatanii fi hatamanis ni jiru. Konkolaataawwan bulchiinsa magaalaa lamaa fi kan warshaa daaku tokkos gubataniiru,'' jechuun waan umamee ibsu.
Magaalaan Yirgaalamiitti itti gaafatamaa waajjira paartii naannicha bulchuu kan ta'an Obbo Baaxiisoo Baatiisoo BBC'tti akka himaniitti, kaleessaa kaasee magaalattii keessa tasgabbiin dhibuu himaniiru.
Kanaanis bakkee araadaa jedhamutti manneen jireenyaa torba, bakka biraatti ammoo manneen sadii, warshaan daaku tokko gubachusaanii, konkolaataawwan waajjira kantiibaa fi dhaabbatichaa, kan dhaabbata tola oltummaa tokko fi kan Loojii Araggaash sadii gubachuu himaniiru.
Har'a jeequmsi akka hin jirree jiraaatonni dubbifne mirkanneessaniiru.
Magaalattii keessatti raayyaan ittisa biyyaa kan mul'atan yoo ta'u, dhaabbileen daldalaa cifamusaanii jiraattoonni ni dubbatu.
''Baankiin cufaadha, waajiraaleen mootummaas akkuma cufamaniitti jiru,'' jedhu.
Mormii kaleessa tureen nami tokko ajjeefamusaa fi lama ammoo miidhaan irra qaqqabuu dhagahusaa jiraataan tokko ni dubbatu.
Namni ajjeefamees qaama mormii kan ture osoo hin taanee nama daldalaaf baadiyyaarraa gara magaalaa dhufe ta'u mirkanneeffadheera jedhu.
Gaafiin naannoo ta'u waaggoota dheeraaf gangalachaa dhufe Adoolessa ALI 11 bara 2011 deebiii argata jedhamee wayita eegamee fi jaarsoliin biyyaas motummaa waliin marii taasisaa osoo jiranu Boordiin Filannoo, Pirezidaantiin naannichaa fi bulchaan godinichaa dhumarratti ibsa kennaniitu madda walitti bu'insaatii kan jedhan ammoo jiraataa magaalattii kan biraati.
Imala galataa dargaggoota Oromoo gara Arbaaminciitti
Magaalatiitti kanneen qabeenyaan saanii jalaa gubate kanneen iddoo biraatii dhufan jedhama jechuun gaaffii dhiyaateef deebii yoo kennan, namoonni bakka biraatii dhufanii qabeenyaan isaanii jalaa hin xuqamiin jiraachu dubbatu Obbo Baaxiisoon.
Kanneen manni jalaa gubatee akka naannoon nuuf hin kennamne taasisaniiru warra jedhaman akka ta'an dhagahuu dubbataniiru. Dhugaattis adda baasuun gubaa akka turan dubbatu.
Kaleessa galgalaa kaasee gara magaalatiitti humni raayyaa seenaa jiraachu kan dubbatan itti gaafatamtichi, dargaggoota kaleessaa gochiicha raawwatan keessaa kan qabame jiraachuu akka hin beekne himaniiru.
Hawaasaa hanga Diillaatti akkasumas hanga Alattaa Wandootti daandiin cufamusaatiin raayyaan ittisaa akka barbaadameetti seenuuf rakkatee ture jedhu jiraattonni magaalatti. Itti gaafatamaan dhaabaas akkasuma daandiin cufamusaa hin dhoksine.
''Har'a Yirgaalam nagaadha,'' kan jedhan itti gaafatamaan kun sochiin baadiyyaadhaa gara magaalaatti taasifamu yeroof raayyaa ittisaa fi bulchinsoota gandaa waliin dubbachuun akka dhaabbatu taasifamu ibsaniiru.
Walumaa galattis, haala godina Sidaamaa keessa jiru ilaalchisee odeeffannoo argachuuf qondaaltoonni eegumsa nageenyaa bilbilleef baay'ina hojiitiin walqabatee gaaffiilee keenyaaf deebii kennuu akka hin dandeenye nutti himaniiru.
Bakka bu'oonni qeerroofi abbootii gadaa 60 saba Gaamoo galateeffachuuf Arbaamiinci galan